Ywar Thar Lay (YTU): Golden Triangle ဝါ ရွှေတြိဂံသို့
Golden Triangle ဝါ ရွှေတြိဂံသို့
ထုံးစံအတိုင်း ဝီရိယကြီးပြီး လာကြိုမယ့်ကားကို စောင့်ကြတယ်။ ကားက ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်က အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီး တခြားခရီးသည်တယောက် နေမကောင်းတာမို့ ဆေးဝယ်တာကို စောင့်ကြရပြန်တယ်။
ဆေးဝယ်ပြီးတာနဲ့ တလမ်းလုံး တောက်လျှောက်မောင်းတာ ရေပူစမ်းမှာ တထောက်နားပါတယ်။ အချိန်မလောက်တာရယ် တိုးထဲမှာ မပါတယ်ရယ်ကြောင့် ရေပူစမ်းမှာ အဆာပြေစား ခဏနားပြီး ဘုရားဖြူကို ထပ်မောင်းတယ်။ ရေပူစမ်းမှာ ပြုတ်ဖို့ ကြက်ဥ ငုံးဥများလည်း ရောင်းကြတယ်။ လမ်းခရီးသာပါတယ်.
ဘုရားဖြူဟာ ထိုင်းအနုသုခုမ ပညာရှင်တဦးတည်းပိုင်ဖြစ်ပြီး Immortal life ဆိုတဲ့ တန်ခိုးစွမ်းအင်မျိုး ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဘီလျံ လေးဆယ်လောက် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ ၁၉ ၉ ၇ခုနှစ်မှာ လေ့လာသူတွေကို ဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဆက်လက်တည်ဆောက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလှူငွေ အနည်းငယ်သာ လက်ခံပြီး ထုိုင်းဘတ်ငွေ တသောင်းထက် မပိုတဲ့ ပမာဏ အဖြစ် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ခြင်း ပြီးစီးမှုဟာ ၂၀၇၀ လောက်မှ လို့မှန်းဆရပြီး အဆောက်အအုံ ကိုးခုပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သံသရာတံတား၊ ကောင်းကင်တံခါးပေါက်၊ ပင်မ အဆောက်အဦးတို့ကို လေ့လာခွင့်ရတယ်။ အဖြူရောင်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကတော့ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီး မျှဝေပေးရင်း ပိုင်ဆိုင်တပ်မက်မှုတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ဘုံနတ်နန်းဆန်တဲ့ ဘုရားဖြူမှာ လည်ပတ်ခွင့် တနာရီလောက်ပဲအချိန်ပေးပြီး မော်တော်ဆိပ်ကို ဆက်တိုက်မောင်းတယ်။ ဒီဖက်ကမ်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဟိုဖက်ကမ်းဟာ လာအိုနိုင်ငံ။ မော်တော်လေး တခဏစီးသွားရုံနဲ့ ဟိုဖက်ကမ်းကို ရောက်ပါပြီ။ လာအိုကမ်းက ဈေးတန်းလေးတခုမှာ ဈေးဝယ်ရင်း တနာရီလောက် အချိန်ပေးပါတယ်။ ယိုးဒယားပိုက်ဆံ သုံးလို့ ရပြီး ဈေးတွေကတော့ မတန်တဆတွေပဲ ဆိုပါတော့။
မော်တော်ပေါ်မှာ တိုးဂိုက်က ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းသီချင်းဆိုပြတယ်. နိုင်ငံခြားသားတွေ အကြိုက်ပေါ့.
မဲ့ခေါင်မြစ်ခြားနေတဲ့ နယ်ခြားမှာ မြန်မာပြည်နယ်စပ်ကို နဂါးရုံဘုရားကနေ သတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာသေးတယ်.
လာအိုကနေ ပြန်လာတဲ့အခါ မြန်မာနဲ့နယ်စပ်ကို မောင်းပါတယ်။ နယ်စပ်ဈေးလေးမှာ ဈေးဝယ်ခွင့် တနာရီ အချိန်ပေးတယ်။ နယ်ခြားဂိတ်ကနေ ကျော်လိုက်ရင် ဟိုတဖက်ကမ်းက ချစ်သောမြေရယ်လေ.
လာအိုကို ကူးခွင့်ပေးပေမယ့် မြန်မာပြည်ဖက်အခြမ်းကို ကူးခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ သွားချင်တယ်ဆိုရင် ယူအက်စ် နှစ်ဆယ်ကျော် ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး တိုးဂိုက်က ရှင်းပြပါတယ်။ လာအိုဖက် အကူးက ၅ကျပ်ပဲဆုိုတော့ ခရီးသည်တွေ မြန်မာပြည် မကူးချင်ကြတော့ဘူးပေါ့။
ဈေးမှာလည်း မြန်မာတွေ အများသား။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဟိုတဖက်ကမ်းကိုကူးပြီး လည်ကြည့်ချင်သေးတယ်။
မြန်မာနယ်စပ်ကနေ အပြန် တောင်ပေါ် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာကို လိုက်ပို့ပါတယ်။ တောင်တွေခြားထဲမှာ အခုလိုမျိုး ရွာငယ်တွေ ဆောက်ပေးပြီး အခါ လားဟူ မုန်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို နေစရာစီစဉ်ပေးတာကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဒီနေရာမှာ အခြေချလာ ပြီးမှ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ အနေနဲ့ တိုးတွေစီစဉ် ဝင်ခွင့်ယူ ဈေးလည်းရောင်းနဲ့ ဘယ်လောက် စီးပွားရေး လာဘ်မြင်သလဲဆိုတာ။ ကိုယ်တွေဆီကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံး မောင်းထုတ်ချင်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား။
ဈေးတွေဝယ်ကြ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြ လုပ်ပြီးတဲ့အခါ အားလုံးဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေခဲ့ပြီ။ ကားပေါ်က ထိုင်ခုံကိုယ်စီမှာ ငိုက်မြည်းရင်း ရွှေတြိဂံကနေ ဇင်းမယ်ကို ပြန်ခဲ့ကြပြီပေါ့။ အရင်တုန်းက နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ရွှေတြိဂံဟာ အခုတော့လည်း ငြိမ်သက်လို့ ......
Posted by ywartharlay-ytu at 4:17 PM
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (172)
ချစ်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ - ကျမ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ နေရာက ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ရှိတဲ့ ကမ်းနားလမ်းပေါ်က လေးထပ်တိုက်ရဲ့ အပေါ် ဆုံးထပ်မှာ။ အိမ်ရှေ့ဝရံတာကနေ လှမ်းကြည့်ရင် မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဆိ...